Musharaxiinta Guddoonka Baarlamaanka Hirshabelle oo maanta la diiwaangelinaayo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Musharaxiinta Guddoonka Baarlamaanka Hirshabelle oo maanta la diiwaangelinaayo
Musharaxiinta Guddoonka Baarlamaanka Hirshabelle oo maanta la diiwaangelinaayo
Waxaa maanta magaalada Jowhar ka socota qabashada araajida musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoonka Baarlaamaanka 2-aad ee Hirshabeelle iyo labadiisa ku-xigeen, waxaana lasoo gaba gabeen doona isla maanta sida ku cad jadwalka doorasho ee uu soo saaray guddiga doorashada.
Musharaxiinta isdiiwaan geliso ayaa lagu wadaa in maalinta barrito ah ay khudbadahooda ka horjeediyaan Baarlamaanka oo ay uga hadlayaan wax qabadkooda haddii ay ku guuleystaan qabashada xilka guddoonka Baarlamaanka labaad Hirshabeelle.
Sida ku cad qoraal soo baxay guddiga doorashada guddoonka , waxaa lasoo saaray jadwalka doorashada guddoonka baarlamaanka 2aad ee Hirshabelle, waxaana lagu wadaa in 4-ta bishan iney dhacdo doorashada guddoonka iyo ku-xigeennadiisa, waxaana xigi doona doorasha madaxweynaha maamul goboleedka iyo ku-xigeenkiisa.
Doorashada Hirshabelle ayaa waxa ay ku socotaa si xawli ah, waxaana sida muuqata dowladda Somaliya ay wadataa Musharax gaar ah oo xilkaasi ay la dooneysaa.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay roob saacado badan ka da’ay Muqdisho
Next articleXildhibaanada Golaha Shacabka oo ansixiyay sharci muhiim ah